06 / 01 / 2018 05 / 01 / 2018 ဂရေဟမ် 1429 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, အသက် 71021 စီးရီး 18, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, စုဆောင်းထားသောအသေးစားစီးရီး 18, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသေးစား, သေးသေးလေး, ထုတ်ကုန်သစ်များ, ကောလာဟလာ, စီးရီး 18
တက်စေခြင်းငှါဇာတ်ကောင်များစာရင်း Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား Series 18 ကို Birthday Cake Guy နှင့် Red Suit Brick Guy အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
၏နောက်စီးရီး Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး 18 ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့် ယခင်ကောလာဟလများအကြံပြု ၎င်းသည်နှစ် ၆၀ ပြည့်နှစ်များနှင့်တိုက်ဆိုင်ရန်မွေးနေ့ပွဲဆင်နွှဲခြင်းတွင်အားနည်းချက်ရှိသည် Lego အုတ်နှင့် minifigure ၏အနှစ်လေးဆယ်။ ဤစာရင်းသည် p ကိုများပြားစွာဖြင့်အတည်ပြုရန်ပုံရသည်arty ကမတ်မတ်ကိုးကား။
ဒုံးပျံ / မီးပန်း Guy
Race Car Guy ဖြစ်သည်
လိမ္မော်ရောင်ပူဖောင်း Lego ဝါသနာရှင်ယောက်ျားလေး
Cowboy ဝတ်စုံ Guy
မီးပုံးပျံ Artist လူရွှင်တော်
ကြောင်ဝတ်စုံ Guy / Girl
အနီရောင်ဝတ်စုံအုတ်ကောင်သည် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အသေးစားရုပ်ပုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Lego Orange Balloon စဉ်အုတ် Lego Fan Boy သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ကိုယ်ထည်ရှိသည့်ဇာတ်ကောင်နှင့်တူသည်။ ဒါဟာသေချာပေါက်လာမယ့်လိုင်စင်ရမဟုတ်သောစီးရီးများအတွက်ပျော်စရာ minifigures တစည်းကဲ့သို့မြည်။
၏တတိယလှိုင်း စုဆောင်းထားသောအသေးစား 2018 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပါတယ် ကောလဟာလသတင်းများအရ ပတ်ပတ်လည် themed ခံရဖို့ ဟယ်ရီပေါ်တာ.
၏လက်ရှိစီးရီး စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အပေါ်အခြေခံပြီး Lego Batman ရုပ်ရှင်, ဖြစ်ကြသည် ယခုရရှိနိုင်.
← Lego Ninjago ရာသီ 8 နောက်တွဲယာဉ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
LEGO အုတ်နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကိုကျင်းပခြင်း →